Posted by pandora at 12:51 AM
စကားပြောတာနဲ့ စာရေးတာကို ရောရေးထားတာမို့် ဘာသာဗေဒဘက်ကကြည့်ရင် မြန်မာစာပေပညာရှင်များ အင်မတန်မျက်မုန်းကျိုးမယ့်ပုံစံပါ။ ဘယ်လိုထင်သလဲ။ ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။
မပန်ရေ.. မပန်ကစာရေးတာဒေါင့်မကျိုးဘူးကွာ.. =P
အဲ့ဒါက အစ်မရဲ့ .. အမ်. ဘိုလိုပြောရရင် Uniqueness လို့ခေါ်မလားပဲ။
အစ်မပြောလို့ဒါလေးကိုသေချာပြန်ဖတ်လိုက်တာ အနော်လည်း နေလည်ကြောင်တောင် ကြယ်တွေကိုရေတွက်ချင်လာဘီ.. waytogo sis!!!! you rocks!!
ကျနော်က မြန်မာစာပေပညာရှင်မဟုတ်လို့ ထို ၀ထ္ထုလေးကို ချစ်သွားပါသည်။ ထို ၀ထ္ထုလေးချစ်သွားတာ ဘာကြောင့်လို့မမေးပါနှင့် ကျနော်လည်းမေးခွန်းများကို